नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हाल अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली खेलाडी उज्वल ठकुरीले फेरी अर्को विश्व रेकर्ड कायम गरे, हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि !
हाल अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली खेलाडी उज्वल ठकुरीले फेरी अर्को विश्व रेकर्ड कायम गरे, हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि !
हाल अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली खेलाडी उज्वल ठकुरीले फेरी अर्को विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन । यस अघि पाँच वटा रेकर्ड कायम गरेका ठकुरीको यो छैठौं रेकर्ड हो । कराँते खेलाडी ठकुरीले हाल सम्म के के मा कसरी रेकर्ड कायम राखे सो जानकारी होस भन्ने हेतुले हामीले उनका ६ वटै प्रमाणपत्र यहाँ तल जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरेका छौं । नेपाल मदर डट कम ठकुरी लाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ । आगामी दिनमा उनलाई अझ राम्रा, ससम्झन लायक, उदाहरणिय बिधाहरुमा यसै गरी विश्व रेकर्ड कायम गर्न प्रेरणा मिलोस, हाम्रो शुभकामना पनि ।
छैठौं रेकर्ड कायम गरे पछी ठकुरीले भनेका छन - "काठमाडौंमा जन्मेको म उज्ज्वल ठकुरी एन आर एन आइ सि सि को खेलकुदको CO-Chair हुँ र छैठौ बिश्व रेकर्ड राख्न सफल भए र सम्पूर्ण एन आर एन को शीर थाडो पार्न सफल भएँ । यो बिश्व रेकर्ड कायम गर्न आर्थिक सहयोग गर्नु हुने आदरणिय गौरी जोसी लगायत न्यूयोर्कको सम्पूर्ण टिम, राजन थपलिया, मित्र नबराज केसी राष्ट्रिय कराते खेलाडी जनक सिह खडका, दाई बिश्व बहादुर शाह, गुरु मोहन बिष्ट सहित सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।" ठकुरीले नेपाली मिडियाहरुले आफुलाई उचित स्थान नदिएकोमा निकै दु:ख मनाउ पनि गरेका छन ।